Dood-wadaag Dalxiis Caalami ah Qaabka Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Dood-wadaag Dalxiis Caalami ah Qaabka Afrika
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Investments • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan • video
Maanta, waddada martigelisay Golaha Dalxiiska Afrika oo la kulma oo salaama munaasabadda xubnaha cusub. Doodda ayaa sidoo kale waxay tagtay daaha gadaashiisa si loo arko waxa ku cusub dalxiiska Afrika.
Kulanku wuxuu kubilaabmay Gudoomiyaha Gudiga Dalxiiska Afrika, Cuthbert Ncube, oo ku bilaabay in inta badan warshadaha safarka iyo dalxiiska ay hoos u dhacday cudurka faafa ee COVID-19, asaga laftiisuba uu dhawaan ka bogsaday coronavirus. Wuxuu yiri, “In kasta oo aan 5 tallaabo gadaal u qaadnay, haddana weli waan taaganahay, oo waxaan billaabaynaa jawaab tartiib tartiib ah oo ku aaddan soo kabashada dalal badankood. Waxaan aragnay dhaq-dhaqaaqa socdaalka iyo furitaanka xuduudaha, taasi oo daliil u ah in safarku yahay mid ka mid ah qeybaha ugu muhiimsan ee dhinacyada dhaqaalaha. ”
Wuxuu intaas ku daray in gaar ahaan Afrika daah-furnaanta aan laga helin dawladaha badankood. Waxaa jira diidmo wadashaqeyn iyo xiiso la'aan gaar ahaan tallaalka. Wuxuu yiri, "Guddiga Dalxiiska Afrika wuxuu si adag u rumaysan yahay in tallaalladu ay gacan ka geysteen cirib-tirka qaar ka mid ah cudurrada ugu xun Dunida, shaki kuma jiro in inta badan ololayaasha tallaalku ay dhab ahaan badbaadin doonaan dadka."
Dheeraad ahaan kulanka waxaa lagu soo bandhigay xubno cusub oo ka tirsan Golaha Dalxiiska Afrika. Halkan waxaad kula kulmi kartaa: